Hay'ad siminaar ugu qabtay Muqdisho 100-haween ah
» Hay'ad siminaar ugu qabtay Muqdisho 100-haween ah
Siminaar ay ka qaybgaleen 100-haween ah oo looga hadlayay qaabka lagu dhisi karo dib u dajin heer degmo ah oo ay soo agaasintay hay'adda Midowga Dhalinyarada Soomaaliyed (UYS) ayaa maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho, waxaana kulankaas goobjoog ka ahaa xildhibaanno haween ka socday ururrada bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin kale.
Xildhibaan Cali Maxamuud Faarax (Cali Seeko) oo ka mid ahaa xubnihii kulanka ka qaybgalay ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay is kaalmeeyaan, isagoo xusay in taakuleynta aan loo adeegsan in lagu huriyo colaadaha ee lagu gargaaro dadka dhibaateysan iyo kuwa faqriga ah.
"Bulshada waa inay iyada is-taakuleysaa, Zakada dadka laga qaadayo ma ahan in dagaal lagu huriyo, waxaan wanaagsan in la siiyo dadka fuqarada ah ama kuwa kale aan waxba haysan ee ay dhibaatadu hayso" ayuu yiri Cali Seeko.
Deeqo C/qaadir Axmed oo ah Guddoomiyaha Guddiga Haweenka ee UYS oo hadal ka jeedisay siminaarka ayaa sheegtay in haweenka looga baahan yahay inay sameeyaan wacyi-gelin, si dhibaatada dalka loo dabo qabto, waxaana ay xustay in deris la sameeyo, hooyo walbana ay caruurteeda koontaroosho, si aan loo marin habaabin, dhalinyarada maantana aanay u noqon kuwo xaabo laga dhigtay.
Sidoo kale Xaawo Maxamuud Cali (Xaawo Kiin) oo ka mid ah Guddiga Haweenka UYS oo siminaarka ka jeedisay hadallada ayaa ka si gaar ah diiradda u saartay gudniinka fircooniga ah iyo dhibaatada uu leeyahay, waxayna sheegtay inay Soomaalida dhaqan ahaan ugu dhegan tahay, balse Gudniinka Fircooniga ah uu yahay mid dhibaato ku ah haweenka.
Xaawo Kiin ayaa sheegtay in gudniinka fircooniga uu yahay mid aan shareecada qabin, waxaana ay xustay in laga sameeyo wacyi-gelin badan si looga gudbo, iyadoo intaa ku dartay in Gudniinka Sunnada uu yahay mid gabdhaha u horseedaya caafimaad oo aan ahayn mid dhibaato ku ah xilliga dhalmada ah.
Raxmo Daahir Maxamed oo ka mid ah xubnihii ka hadlay kulanka ayaa iyaduna ka hadashay sida hay'adaha sama-falka u gaarsiin karaa gobolada dalka gargaarka loo baahan yahay ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay saameyn ku leedahay dhibka shacabka ku dhacaya, waxayna sheegtay inay in loo baahan yahay in shacabka loo ogolaado gargaarka.
Xubnaha Siminaarka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Luul Warame Guuleed, Faadumo Axmed Geeddi oo ka mid ahaa Gudiga Haweenka, waxaa halkaas tixo gabay ah kasoo jeedisay Abwaanad Caasho Warsame Cumar, iyadoo ku cabirtay dhibaatada gudniinka fircooniga uu leeyahay.
Carfoon Wehliya Siyaad oo soo xirtay siminaarka kuna hadlaysay magaca gudoomiyaha UYS Ciise Xasan Diinax ayaa sheegtay in loo baahan yahay in haweenka ka faa'ideystaan siminaarada aqoon kororsiga ah, isla markaana wixii ay ka bartaan ay gaarsiiyaan bulshada inteeda kale.
Hey'adda UYS ayaa ka qeyb qaadata horumarinta bulshada, aqoon kororsiga iyo wacyi gelinta ay u bulshada qeybaheeda kala duwan u qabato, waxaana ay siminaar ugu qabataa Odayaasha dhaqanka iyo haweenka.